Dood iyo Khilaaf ka taagnaa 20-ka Xildhibaan ee Ahlu-Sunna - Awdinle Online
Dood iyo Khilaaf ka taagnaa 20-ka Xildhibaan ee Ahlu-Sunna
January 01, 2019 (Awdinle Online) –Shir Dhuusamareeb ku dhex maray Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Kheyre, hoggaanka Ahlu-Sunna iyo odayaasha beelo tabasho ka qabay xildhibaanada Ahlu-Sunna ayaa waxaa ka soo baxay is fahan hor dhac ah.
Odayaasha beesha degta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee Ceyr ayaa tabashada ugu badan ka qabay 20-ka xildhibaan oo ay soo xushay Ahlu-Sunna, kuwaas oo ay ku lahaayeen shan xildhibaan.
Xasan Kheyre oo Dhuusamareeb u tegay sidii uu u xalin lahaa khilaafka ka dhashay xildhibaanadii ay dowladdu u ogolaatay inay soo xusho Ahlu-Sunna ayaa odayaasha beeshaas ka dalbaday inay tanaasulaan oo Ahlu-Sunna u daayaan shantaas xildhibaan ama sabab ay u noqdaan horay u socod la’aanta dhismaha Galmudug.
Xogta ayaa sheegeysa in odayaasha beesha Ceyr ay ogolaadeen dalabkii Ra’iisul Wasaaraha, isla markaana Ahlu-Sunna u daayeen shan ka mid ah lix xildhibaan oo beeshaasi ay qoondo ahaan ku leedahay Galmudug.
Xildhibaan Mahad Salaad, oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee Galmudug laga soo doorto ayaa qoraal uu soo dhigay facebook ku yiri “Waxaa is afgarad ku soo dhamaaday kulan galabta ku dhex maray magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Dowlad Goboleedka Galmudug Ra’iisul Wasaaraha, Wasiirka Arimaha Gudaha, Xildhibaanada labada Gole Barlamaanka Federaalka ku metala deegaanadaan iyo Odoyaasha Dhaqanka degmooyinka Dhuusamareeb, Guriceel iyo Matabaan.
“Waxaan halkaan uga mahadcelinayaa Ra’iisul Wasaaraha, Wasiirka Arimaha Gudaha, Xildhibaanada iyo Odoyaasha Dhaqanka oo si xilkasnimo leh isaga xilsaaray in meesha laga saaro madmadow ka dhashay xulista Xildhibaanada Galmudug.”
Markii ay odayaashu tanaasuleen, ayaa wasiirka arrimaha gudaha waxa uu kulan iskugu yeeray odayaasha dhaqanka beelaha kale ee Galmudug oo uu u soo jeediyey inay joojiyaan tabashooyinka ay ka qabaan xildhibaanada ka yimid Ahlu-Sunna, isla markaana ay ku daydaan beesha Ceyr oo Ahlu-Sunna uga tanaasushay shan ka mid ah lix kursi oo ay ku lahaayeen baarlamaanka Galmudug.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo hoggaamiyaha Ahlu-Sunna ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin in 20-ka Xildhibaan ee Ahlu-Sunna sidooda loo dhaafo codkoodana ay siiyaan musharaxa ay wadato dowladda, iyadoo xogta aan helnay ay sheegeyso in Ahlu-Sunna loo balan qaaday inay xukuumaddu kala shaqeyn doonto inay hesho guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug.
Previous articleDowladda Sucuudiga oo war kasoo saartay qarixii ka dhacay Ex-Control Afgooye.
Next articleTaiwan military chief and 7 other offices killed after helicopter crash
Sarkaal Ciidan oo Caawa lagu dilay Beled-Xaawo
Waare iyo Taliyaha xoogga oo ka shiray Amniga Hir-Shabeelle
Galmudug oo soo bandhigtay Ciidamo la dagaalama Shabaab+Sawirro
C/raxmaan Cabdi Shakuur oo Arrimaha doorashooyinka kala hadlay James Swan?
Al Shabaab oo Caleemo saartay Suldaanka Muddulood Ee Jubbooyinka
Ayax Farabadan oo dhibaato ku haaya degaannada Puntland
Muxuu Ra’iisul Wasaaraha Cusub kala hadlay Safiirada Beesha Caalamka?
Nin lagu eedeeyay Kufsi laba haween ah oo Afgooye oo lagu qabtay
Cumar Filish & Safiirka Midowga Yurub oo kulan xasaasi ah yeeshay+Sawirro